SERASERA, TENY MALAGASY: 17/03/11 - rov@higa
SERASERA, TENY MALAGASY: 17/03/11
17 Mars 2011, 21:37pm
Vao voatsangana ny Governemanta sy Parlemanta, dia Afaka mody Ravalomanana
Tao Lusaka (Zambia) ny delegasion’ny Ankolafy Telo, tarihin’ny filoha Marc Ravalomanana, omaly no nanomboka ny fitetezana ireo firenena mpikambana ao amin’ny SADC hanazavana amin’izy ireo ny zava-misy marina eto Madagasika, ka hanolorana an-tanana ny tolo-kevitra handaminana ny krizy, izay mirakitra ny tokony hanatanterahana fihaonana an-tampony eto Madagasikara hiantsoana ireo filohan’ankolafy nidinika tany Maputo sy Addis Abeba miampy ireo mpitarika vondron’antoko lehibe eto hiverina an-databatra boribory hitady sori-dalana ifanarahana hivoahana amin’ny krizy.
Hihazo an’i Botswana ny delegasiona amin’ity anio ity. Fa nialoha ny nialan’izy ireo tao Afrika Atsimo, dia nisy ny harivan’ny talata 15 martsa teo, tao amin’ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ao Johannesbourg, ny fihaonana teo amin’ny filoha Marc Ravalomanana sy ny filoha Mozambikana teo aloha sady lehiben’ny iraka mpanelanelana vahiny, Joaquim Chissano. Natolotr’Atoa Ravalomanana an-tanana an’ity farany ny taratasy mirakitra ny tolo-kevitra sy ny fitakian’ny Ankolafy telo ny hanatanterahana io fihaonana an-tampony eto io, ary koa ny fanitsiana miendrika volavolan-tsori-dalana avy amin’ny ankolafy Ravalomanana, heverina fa handaminana ny krizy.
Misy andininy 44 izy ity. Anisan’ny fanovana ao anatiny, raha oharina amin’ilay naroson’ny Dr Leonardo Simao hatao rangopohy teny Ivato ny 09 martsa, dia ny fanavaozana tanteraka ny firafitry ny Kongresy, ny filankevitra ambonin’ny tetezamita, ary ny vaomieram-pirenena mahaleotena momba ny fifidianana. 11 volana aorian’ny fanaovan-tsonia ny sori-dalana ifanarahana no hanatanterahana ny fifidianana malalaka, mangarahara ary ankatoavin’ny rehetra. Anatin’ny fifanarahan’ireo mpanao politika mandrafitra io sori-dalana io no ivoahan’izay ho filohan’ny tetezamita iombonana. Mametra-pialana 90 andro alohan’ny androm-pifidianana ny filohan’ny tetezamita, ny praiministra sy izay mpikambana amin’ny governemanta maniry hirotsaka amin’ny fifidianana filoham-pirenena na parlemantera.
Araka ny andininy faha-18 dia foana tsy manan-kery avokoa ny didim-pitsarana nivoaka rehetra manameloka ny filoha Marc Ravalomanana, satria tsy mahefa mitsara azy ny fitsarana namoaka izany. Famotsoran-keloka faobe no omena izay voakasiky ny raharaha politika teo anelanelan’ny 2002 sy 2099, ankoatra ireo nahavita heloka bevava tamin’ny zanak’olombelona, na voaheloka noho ny fandringanana olona na nanosihosy ny zon’olombelona. Aroso hankatoavin’ny Parlemanta ny lalàna momba ny amnistia, ary tsy misy fifidianana azo tanterahina raha tsy tontosa izany, araka ny andininy faha-19. Any amin’ny andininy faha-21 kosa no milaza ny fahafahan’Atoa Ravalomanana miverina an-tanindrazana.
Voalaza ao, araka ity volavolan-tsori-dalana ity, fa antoky ny vahaolana maharitra amin’ny krizy eto Madagasikara Atoa Marc Ravalomanana, ka araka ny andininy faha-20, milaza ny tokony hamoahan’ny Parlemanta lalàna mamaritra ny satan’ireo filoham-pirenena taloha, dia afaka miverina malalaka eto an-tanindrazana ny tenany vantany vao tafajoro ny governemanta sy ny Parlemantan’ny tetezamita ifanarahana. Ny mpitondra ny tetezamita no miantoka ny fiarovana azy sy ny fianakaviany ary ny fananany. Andrasana moa izany izay vokatry ny dian’ny delegasiona tarihiny mihaona tamin’ny troikan’ny SADC, indrindra mikasika ity sori-dalana aroson’ny ankolafy Ravalomanana ity.
Fanendrena PM Nandika sori-dalana sahady
Vita hatreto ny tombantombana, tapitra ny ankijijy, nohamafisin’i Andry Rajoelina amin’ny toerana maha praiministra azy ny Jeneraly Albert Camille Vital.
«Nandinika lalina ny tenako, namakafaka, naka ambony, naka ambany, nijery ny lafiny tsara sy ny lafiny ratsy rehetra, fa indrindra ny tombontsoa avon’ny Firenena, dia niompana tany amin’Andriamatoa Jeneraly Albert Camille VITAL ny safidy», hoy ny filohan’ny FAT omaly tao Ambohitsorohitra. Ny azo antoka dia tsy maintsy nandray io safidy izy ho fiarovana ny sezany sy ny tenany. Ankilan’izany, tapitra amin’ity 17 martsa ity koa ny tetezamin-dRajoelina. Tsy misy valaka amin’izay nataon’i Andry Rajoelina tamin’ny septambra 2009, nitazona an’i Monja Roindefo ho praiministra ary naniraka ity farany hanangana governemantan’ny firaisam-pirenena izy ity.
Nampiditra an-dry Manorohanta Cécile, Alain Andriamiseza, Pr Alain Tehindrazanarivelo … tao anaty governemanta izy ireo mba hanomezana endrika ny fisokafana, saingy tsy nety nahazo fankatoavana iraisam-pirenena izany. Hanara-dia azy iny ity in-dray mitoraka ity ary vao mainka mikatso ny raharaham-pirenena, noho izy efa nandika sahady ilay sori-dalana vita rangopohy teny Ivato. Olona efa notendren’i Andry Rajoelina ary nanaiky hiara-kiasa taminy nandritra ny 15 volana i Camille Vital. Iray lasitra tamin’ireo 109 nosokajian’ny filankevi-pilaminan’ny Vondrona Afrikanina ho sakana tamin’ny ezaka natao hamerenana ny ara-dalàna eto Madagasikara izy, ary voasazy noho izany. Miandrandra ny fankatoavan’ny fianakaviambe iraisam-pirenena moa i Andry Rajoelina aorian’izao fanendrena ka hirosoana amin’ny fananganana governemanta izao, ka ho hita eo.
Nanaitra rahateo ny filazany fa “efa ao anatin’ny Repoblika fahefatra tanteraka isika ankehitriny satria efa mipetraka ny lalàmpanorenana”. Mazava eto fa noraisin’ny FAT ho fankatoavana ny fitsapan-kevi-bahoaka natao tamin’ny 17 novambra 2010 nifidianana lalàmpanorenana ilay sori-dalana natao rangopohy teny Ivato tamin’ny 9 martsa 2011. Mbola tantara hafa anefa ity raha ny fahitana ny akon’ny dian’ny delegasion’ny Ankolafy telo tarihin’ny filoha Marc Ravalomanana any Zambia sy Botswana any.
Monja Roindefo Namoaka tsiambaratelo
“Tsy mandeha amin’izay laoniny ny raharaham-pirenena raha ny zava-misy iainana amin’izao fotoana izao no zohina sy halalinina”, hoy ny Praiministra teo aloha Monja Roindefo tao Tolagnaro ny talata 14 martsa teo.
Aminy dia nivaona tanteraka tamin’ny tanjon’ny tolona tamin’ny 2009 no misy ankehitriny, ka nilazany fa “fitiavan-tena, fanamparam-pahefana no mahazo sehatra, fanampenam-bava amin’ny tsy fahazoana miteny na maneho hevitra ankalalahana no mahazo laka”. Nanantena fiovana ho amin’ny tsaratsara kokoa ny Malagasy saingy vao mainka loza no hita, hoy izy. Nambarany fa fifikirana amin’ny seza mba ahafahana mameno paosy amin’ny fitantanana gaboraka ny fananam-pirenena no misy.
Noresahiny koa ny referandaoma tamin’ny 17 novambra lasa teo iny, ka nilazany fa mbola voaporofo ny fomba ratsy ataon’ity fitondrana tetezamita ity tamin’iny fifidianana iny. “Hosoka maro no nisy, indrindra ny tao amin’ny faritra Androy izay lazaina fa nankato 100% iny lalàmpanorenana noteren-ko masaka iny”. Amin’i Monja Roindefo dia “tsy misy izany Repoblika faha-4 izany fa ny firosoana avy hatrany amin’ny repoblika faha-5 no izy”. Fa navoakan’ity praiministra taloha ity ny tsiambaratelo mahakasika ny helikôptera miisa 4 novidian’ny FAT, nolazaina fa hitandroana ny filaminana. “Maro ireo miaramila no tsy resy lahatra amin’ny fahazoana iny fitaovana iny noho ny lafiny ara-teknika”, hoy izy.
Toy izany ihany koa ny fitaka mahakasika ny fitafiana ho an’ireo miaramila, izay nanaovana lanonana ofisialy farany teo. Anisan’ny mampalahelo an’ity mpanao politika ity ny tsy filazana ny tena zava-misy marina amin’ny vahoaka fa izay mahametimety an-dry zareo mpitondra ihany no ampanjakaina sy voizina amin’ny haino amanjerim-bahoaka. Naneho hevitra mikasika ny fananganana governemanta iraisana koa ny tenany ka nanambara fa “mbola fitondran’olon-tokana no misy sy ho avy eo, ka tsy hisy firenena hankato antsika amin’izao tranga misy ataon’ny FAT izao”. Nambarany koa fa “efa tapitra ny fitondran’i Andry Rajoelina, ka tsy tokony hiandry izay filoha voafidim-bahoaka izy vao hiala amin’ny toerana”. Nanamafy ny hilatsahany hofidina ho filoham-pirenena amin’ny fifidianana ho avy eo i Monja Roindefo, nandritra ity diany tany amin’ny faritra Anosy ity.
Noterena hanondro an-dRAKOTOARIVELO i Tsima?
Tsy nanaiky hijanona fotsiny amin’izao ireo rahalahin’i Tsima, izay voatondro fa teknisiana nokaramain-dRakotoarivelo Mamy, hanamboatra ilay fitaovana hanapoahana ny baomba nifofoana ny ain’ny filohan’ny tetezamita avo terý amin’ny lalan’i Masay. « Notsindronina tamin’ny antsy ny vodin’ny rahalahinay, nodorana tamin’ny herin’aratra izy, ary noterena hanondro an-dRakotoarivelo Mamy ». Izany no teny naverimberin’izy telo mirahalahy rahalahin’i Tsima raha tafaresaka sy nitaraina mahakasika ny tsindry hazo lena nanjo ny havany. Efa ny Zoma i Tsima no notazonina tao Ambohitsorohitra araka ny fanazavan’izy ireo hatrany, rehefa avy nosamborina teny amin’ny trano fonenany teny Manakambahiny... (Suivre le lien)
Baomba teny Masay: Tsy mety ringana ny mpomba an-dRavalo
Tena be mpaminany eto amintsika. Raha vao nipoaka ilay baomba saika nahavoa ny filohan’ny tetezamita teny Masay, dia nisy olona ambony nilaza teny fa misy ambadika politika izao. Nitohy tamin’ny fanamafisana fa misy mpanao politika goavana no hampanantsoina ato ho ato, momba iny baomba iny.
Nipoitra tokoa ny faminaniana, andro vitsy tato afara, satria dia nisy ny olona voasambotra, ary nisy ny fiantsoana an-dry Mamy Rakotoarivelo teny amin’ny DST, ary nampiakarina eny anivon’ny fampanoavana omaly. Nisy olona izay nambara naseho ho fanta-bahoaka indray nilaza fa ingahy Mamy Rakotoarivelo no naniraka azy hampanao iny, raha ny fahitana azy ireo tamin’ny haino aman-jery, toy … (Suivre le lien)
Fandalina / Tsy nisy fahagagana e !
Araky ny efa nampoizina dia ny jeneraly Albert Camille Vital ihany no naverin'ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina ho praiminisitra "vaovao" hitantana ny governemanta iombonana voalazan'ny tondro-zotra natao rangopohy teny Ivato…
Toa fihetsiketsehana sy seho ivelany ihany no nataon'ireo vondrona na antoko politika nanolotra olona hofidiana sy hifaninana teo anatrehan'ny filoha mba hampisehoana na hanamafisana fa tsy teraka tamin'ny fanapaha-kevitry ny olo-tokana izao fanendrena praiminisitra "vaovao" izao.
Hoy kosa ireo mpandinika politika sasany mametram-panontaniana hoe : Azo lazaina ve fa nisy safidy malalaka tanteraka teo amin'ny filoha? Raha nisy mantsy ireo antoko na vondrona izay nanaraka ny fitsipi-dalao ka nanome anarana telo, aoka tsy hadinoina fa ny TGV izay antoko nipoiran'i Andry Rajoelina sy noforoniny dia tsy nanaja izany na niatsara-ivelatsihy fa tonga dia nampibaribary fa … (Suivre le lien)
Lalao Randriamampionona : "An'i Simao irery ny tondro-zotra natao rangopohy"
"Tsy tokony afangaro ary avahana tsara i Dr Simao, Joaquim Chissano ary ny vondrona SADC". Io no nambaran-dRtoa Lalao Randriamampionona izay mpitarika ny vovonana nasionaly iray eto amin'ny firenena, raha nanontaniana ny heviny mikasika ny raharaham-pirenena misy ankehitriny.
Raha tsorina arak'izany ny fanazavany, dia manamafy izy fa tsy avy amin'ny vondrona SADC akory ny tondro-zotra natao rangopohy farany teo. Aminy, dia i Dr Simao izay tsy iza fa iraka tsotran'i Joaquim Chissano no namolavola an'iny. Nentiny nanamafisana izany fanazavany izany ny "tsilian-tsofina" henony nandritra ny fivorian'ireo mpanelanelana aty Afrique Australe natao tany Johannesburg ny 1 sy 2 ary 3 martsa lasa teo. Isan'ny nanatrika izany ny tenany ary nanamafy fa tsy nisy resaka mikasika an'i Madagasikara manokana tany, saingy tamin'ny alàlan'io "tsilian-tsofina" io no nahafantarany fa tsy avy amin'ny vondrona SADC mihitsy ny tondro-zotra nametrahana ny rangopohy.
Noho izany, dia tsy mbola ahavaha ny olana mihitsy ny zava-misy ankehitriny, indrindra fa io firosoana tamin'ny fanendrena ny praiminisitra io satria mbola tsy eken'ny rehetra sy tsy ahitana ny marimaritra iraisana misy eo amin'ireo ankolafy voakasika. … (suivre le lien)
Fitazonana an’Ing Mamy Rakotoarivelo: Be no tsy ara-dalana hoy ny mpisolovava azy
Araka ny filazan’ny Me Hanitra Razafimanantsoa, tsy voahaja ny fiheverana ny olona ho tsy meloka ao anatin’ity raharaha ity
« Raha tokony ho tapitra omaly tamin’ny 11 ora antoandro ny fe-potoana ara-dalana hitazonana an’Atoa Mamy Rakotoarivelo, dia voatery nohalavaina ho 15 andro indray izany, noho ny fisian’ny toe-java-baovao ao anatin’ny fanadihadiana » hoy ny Me Hanitra Razafimanantsoa, isan’ny mpisolovava ity Sekretera Jeneralin’ny Antoko Tiako i Madagasikara ity omaly. Araka izany, tsy tanteraka indray ny fanolorana azy ireo teo anatrehan’ny Fampanoavana na maro aza no niandry izany. Fantatra ihany koa fa, etsy amin’ny Brigade Criminelle Anosy no hitazonana azy amin’izao fotoana izao. Ireo olona telo hafa kosa nalefa eny amin’ny kaomisaria Central etsy Tsaralalana. Ny anton’izany, dia noho ny tsy fisian’ny toerana tao amin’ny DST. Araka ny fanazavan’ny Me Hanitra Razafimanantsoa ihany “ tsy voahaja ny fiheverana ny olona ho tsy meloka alohan’ny fitsarana azy( Présomption d’innocence) satria tamin’ny dimy ora hariva (talata) dia efa nisy ny valan-dresaka natao tamin’ny mpanao gazety, tamin’ny fito ora hariva anefa vao … (Suivre le lien)
Raharaha Mamy Rakotoarivelo
Nitantara ny zava-nitranga ny rafozan’i Misa, iray tamin’ireo hoe « mpanamboatra baomba »
Tamin’ny zoma alina tamin’ny 10 ora no nalain’ny zandary anankitelo niaraka tamin’i Tsima namany teny an-tranony izy ary tsy nitondra taratasy milaza ny anton’ny fisamborana sy ny fakana azy ireo.
Nahita an’ilay fitantarana tamin’ny fahitalavitra afakomaly momba ny raharaha fanapoahana baomba, saika namonoana ny Filohan’ny FAT Andry Rajoelina tetsy amin’ny Marais Masay, ny rafozam-bavy sy ny rafozan-dahin’i Misa, iray tamin’ireo nosamborina fa hoe nanamboatra an’ilay baomba, dia tonga nanatona teto Ankorondrano ihany koa. Nitantara ny zava-nitranga hatramin’ny fisamborana an’i Misa tamin’ny voalohany izy mivady dia Rtoa Razanamparany Emelie sy Randrianasolomiadanarinivo Rakotomalala. Araka ny resaka nataon’izy ireo dia ny zanany vavy izay vadin’i Misa no nitantara. Tamin’ny zoma alina tamin’ny 10 ora no nalain’ny zandary anankitelo niaraka tamin’i Tsima namany teny an-tranony izy ary tsy nitondra taratasy milaza ny anton’ny fisamborana sy ny fakana azy ireo. Raha ny resak’izy ireo ihany dia …(Suivre le lien)